Gịnị bụ New Na Apple iOS 7.1
Gịnị bụ New Na Apple iOS 7.1 na ihe ndị na mkpa gị ige nti
Ọ bụ ezie na iOS 7.1 na-abịa na ọ dịghị n'ụwa-n'ikwe mmelite, ya bụ ogologo cheere update. Ọ n'ezie na-eweta ihe ọrụ dị mkpa: okuku fix na iPhone 5s, onye ọrụ interface ndozi, Ịma Ọkwa doro anya, mma Kalinda ihe, na ihe ọhụrụ: agbakwụnye CarPlay. M na na na otú ndị mmadụ na-eche banyere ihe ndị a ndozi ma ọ bụ ọhụrụ atụmatụ. N'ihi na m na, enweghị m ike imeri ọnwụnwa nke na-agbalị niile atụmatụ ndị a na ịhụ otú ha na-arụ ọrụ. M na-ama kwalite m iPhone 5s ka ọhụrụ iOS 7.1.0. Ok, na-esote, ka na-a ghọta nke a ndozi ma ọ bụ ọhụrụ atụmatụ na-amụta banyere ihe ị ga-ntị tupu na upgrading gị iPhone na iOS 7.1.
Part 1. iOS 7.1 Upgrading Nchọpụta nsogbu
Part 2. Gịnị bụ New Na iOS 7.1?
Part 3. Olee otú iji nweta nkwalite ka iOS 7.1
Part 4. ndabere gị iPhone Tupu upgrading ka iOS 7.1
Part 5. Gịnị na-eme ma ọ bụrụ iPhone Data Lost Mgbe upgrading ka iOS 7.1
Part 6. Wondershare emelitere Software ka Kwado iOS 7.1
Part 7. Olee jailbreak iOS 7.1?
Ajụjụ # 1: Ọ ga-ekwe omume ka ihichapụ multiple ozi ozugbo na iPhone mgbe upgrading ka iOS 71.? Solutions: Chọpụta. Inside a ozi eri, a na-enweta mpempe ozi aba na-ewetara ndị "More" gbapụta. Na mgbe ahụ ị nwere ike họrọ ozi otu-site-otu ka ihichapụ ha na oge.
Ajụjụ # 2: emelitere-iOS 7.1 na-achọta na m keyboard zara nnọọ nwayọọ nwayọọ mgbe touchscreen zara ngwa ngwa mgbe m imeghe na ngwa na ntọala. Ma mgbe m na pịnye, o yiri m ngwa ngwa karịa iPhone ịghọta ihe ndị ọrụ, n'ihi ya, m ga-retype ugboro ugboro ozi. Solutions: Mgbe ị na-ahụ keyboard zara nnọọ nwayọọ nwayọọ ma ọ bụ na-anabata na niile, ị kwesịrị ị na tọgharịa ya. Pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia ma họrọ Tọgharia keyboard ọkọwa okwu.
Ajụjụ # 3: m na emelitere m iPhone ka iOS 7.1 taa. Ihe niile bụ ihe ọma ma e wezụga m GPS. The GPS bụ mgbe niile na n'elu ihuenyo. M na agbalịwo ihe nile, gụnyere restarted m iPhone ma na-emechi niile ngwa. Otú ọ dị, ọ bụ na-abaghị uru. Solutions: Mgbe ị na-ahụ ebe Service (GPS) na akara ngosi na-anọ na n'elu gị iPhone ihuenyo, na-atụgharị ya anya, ị kwesịrị ị ịtọ gị iPhone. Pịa Ntọala> Nzuzo> Ọrụ ebe, gbanyụọ ọnọdụ ọrụ otu ugboro maka niile, ma ọ bụ i nwere ike gbanyụọ ọnọdụ ọrụ maka ọ bụla ngwa na n'etiti window. Ọ na-adabere gị mkpa.
Ajụjụ # 4: iOS 7.1 na-eme Kefriza mgbe akparị ụka, multitasking. Na mgbe mmalite a na nchekwa, ọ lags. Nwere ike adịghị emetụ ihe ọ bụla ga-relock ngwaọrụ! Gịnị bụ ihe ọjọọ? Solutions: N'ihi na nke a ọnọdụ, e nwere ihu ọma 2 ụzọ i nwere ike gbalịa idozi ya. 1st, mechie niile ngwa ọdịnala na multitask ihuenyo na Malitegharịa ekwentị gị na ngwaọrụ. Na ọtụtụ ndị gbalịrị otú a, ọ na-arụ ọrụ. 2nd, weghachi ngwaọrụ gị dị ka a ọhụrụ.
Ajụjụ # 5. Nwere ụfọdụ ndabere mbipụta. O yiri ihie na m iPhone 5s bụghị otú na-egbuke egbuke dị ka ọ na-adịbu. Solutions: Ụfọdụ ndị na dị nnọọ kwuru na ha dozie nsogbu site ịgbanyụ iPhone. M nye ndụmọdụ ị na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Accessibility Iji gbanye Belata Motion nhọrọ. Na mgbe ahụ enweta Ntọala> na akwụkwọ ahụ aja & ihie ka ihie ya.
# 1. Big New Njirimara maka iOS 7.1: CarPlay
Ndị a ma ama ọhụrụ mma nke iOS 7.1 bụ CarPlay. Ọ na-kere bụ dabere na ojiji nke Siri nye, àjà ọrụ ihe mfe ụzọ iji zaghachi ekwentị oku, kpebiere ederede ozi, ohere music n'ọbá akwụkwọ si a ụgbọala. New kaadị Ferrari, Mercedes-Benz, na Volvo ga na-akwado CarPlay. Na Ford na BMW na-ekwe nkwa na-akwado ya oke. Ma ugbu a, Siri akwado jide na-ekwu okwu. Ọ pụtara mgbe ị jituo Home button, ị nwere ike na-ekwu okwu ogologo ahịrịokwu na kwụsịtụrụ. Siri ga na hazie gị iwu olu ma ọ bụ ozi mgbe ị hapụ Home bọtịnụ. Nke a bụ mara ezigbo mma, n'ihi na tupu iOS 7.1, ọ na-eme mgbe niile na n'ihu gị gụchara a iwu, Siri malitere ịrụ ọrụ.
Mụta ihe banyere CarPlay, ẹyak Apple ukara saịtị n'ihi CarPlay >>
# 2. Random Crash Idozi
Ọ bụrụ na e nwere ihe otu ihe na iOS 7 ka were ya iwe ọrụ, ọ pụrụ ịbụ random okuku nke iPhone 5S, iPad Ikuku na iPad Obere na Retina Ngosipụta ọrụ anọwo na-enwe. Nke a ahụhụ ka adị kemgbe ntọhapụ nke iOS 7. O mere ka a n'ụlọ ihuenyo okuku na-enweghị ihe doro anya kpatara. Na January, Apple enen ka Mashable na a fix maka "White ihuenyo nke ọnwụ" bụ na ndị na-abịa update. Na n'ikpeazụ ọ bụ ebe a. Mgbe m kwalite ka iOS 7.1, m chọpụtara na m iPhone 5s eme ihe ngwa ngwa na ndị ọzọ na-agbaba were were. Na m gbalịrị multi-ọrụ, e nweghị okuku na niile. Na ọ na-kwuru nke a mma siri ike arụmọrụ maka iPhone 4 dị ka mma.
# 3.Notifications Doro Anya mmuo
Ngosi bụ ihe ọma mgbe anyị mkpa-amara gị ọkwa na e nwere ihe ọhụrụ ma ọ bụ ihe anyị kwesịrị ime. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nwere abụọ ma ọ bụ karịa Apple ngwaọrụ, ị nwere ike ọ gaghị adị njikere ikpochapụ otu Ịma Ọkwa na otu ọ bụla nke gị iOS ngwaọrụ. iOS 7.1 ga ikpochapụ Ịma Ọkwa na gị ọzọ iOS ngwaọrụ. Mgbe aza a FaceTime oku na otu nke ngwaọrụ gị, otu ngosi na ngwaọrụ ndị ọzọ ga-ekpocha. Nke a na atụmatụ dị maka iMessage.
# 4.Better Kalinda Iketịbede & Igwefoto Tweaks
Na iOS 7.1, Apple mma na ngosipụta nke Kalinda Iketịbede, na-eme ya ezigbo mfe n'ihi na ọrụ ahụ na ndepụta nke ya ma ọ bụ ya schedules. Mgbe taping otu ụbọchị na taping ndepụta icon, ọ ga-egosipụta niile ihe maka ụbọchị na ala. Mgbe ị na-elele ihe n'ihi a ọnwa, dị nnọọ mkpa ka enweta ndepụta na akara ngosi na top nke ọnwa ikpughe dum ndepụta. E nwere HDR mwube maka igwefoto ngwa na iPhone 5S. Tupu, ọrụ dị mkpa na-atụgharị ma ọ bụ gbanyụọ nhọrọ aka. Ugbu a na iOS 7.1, ozugbo ị na ịtọ HDR akpaaka, ọ ga-etinyere mgbe ị na-agbalị ogbugba a foto ma ọ bụ ihe oyiyi achọpụtara.
# 5.Accessibility: Motion Belata & Text Customizable
The akụkụ pụrụ iche maka ihe iOS ngwaọrụ nwere ike ịbụ snazzy ngagharị mgbe ịmafe n'etiti aga-eme. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-eche na-arịa ọrịa nke ya. Ugbu a na iOS 7.1, ọrụ ike gbanyụọ ngagharị nhọrọ site eme Belata Motion, na-eme iOS ngwaọrụ kama static. Ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na-agụ ederede na gị iPhone, ị nwekwara ike ime ka ederede ibu na bolder. Pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Accessibility. Si ebe a, enweta Ibu Ụdị ka a predefined ederede size ma ọ bụ nwee Ibu Accessibility Nha.
The n'elu kwuru banyere bụ isi oganihu iOS 7.1. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwu banyere ihe bụ ọhụrụ ke iOS 7.1, ị nwere ike ịga na Apple si ọrụ saịtị ebe a.
Ihu ọma, e nwere 2 ụzọ imelite gị iOS ka ọhụrụ iOS 7.1. Ọ na-ewe 4 ma ọ bụ 5 nkeji n'ihi na ọrụ imelite ka iOS 7.1, na-anọkarịrị na-adabere na netwọk ị na-eji. Site n'ụzọ, n'agbanyeghị ihe version nke iOS ị na-eji, ị nwere ike ozugbo kwalite ka iOS 7.1, awụgharị na iOS 7.0.6.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa nke kwesịrị nwere iTunes preinstalled site eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Launch iTunes na kọmputa gị. Na mgbe ahụ e kwesịrị a mmapụta elu, na-arịọ gị ka ị na kwalite ka iOS 7.1. Ị kwesịrị ị na pịa Download na Update. Ọ pụrụ ewe gị a nkeji ole na ole ibudata iOS 7.1. Mgbe nbudata, iTunes ga-eduzi gị na usoro nke upgrading gị iOS ngwaọrụ iOS 7.1.
#Via Your iOS Ngwaọrụ:
Ọ bụ nnọọ mfe. Pịa Ntọala> Ozuruọnụ> download iOS 7.1 na wụnye ya na gị iOS ngwaọrụ.
Upgrading ka iOS 7.1 dị mfe. Otú ọ dị, ọ ga-ewute ma ọ bụrụ na ị na-ahụ na ị na-efu data mgbe upgrading ka iOS 7.1. Iji zere data ida mberede, tupu upgrading ka iOS 7.1, ị ga mma ndabere gị iOS ngwaọrụ:
Ndabere SMS tupu upgrading ka iOS 7
Ọ bụrụ na ị na-adịghị kechioma furu efu data mgbe upgrading ka iOS 7.1, ị nwere ike iweghachi ihe data si iTunes ndabere ọ bụrụ na ị kwadoo gị iOS ngwaọrụ kwuru na Part 2. N'okpuru bụ ụfọdụ ngwọta na pụrụ ịbụ nnọọ aka:
Wondershare MobileTrans - Nyefee ọdịnaya n'etiti iPhone, Android, blackberry na Nokia. Na ya, ị ga-enweghị nsogbu nke na-ebufe ozi ederede, kọntaktị, music, videos, foto, na ọzọ gị iPhone mgbe ị upgrading ka iOS 7.1.
Wondershare TunesGo - Nyefee Music si iPhone, iPod, na iPad ka iTunes na Computer amamihe. E wezụga iji atụmatụ na iTunes adịghị nwere, ị ka nwere ike iji ya ka mmekọrịta faịlụ ozugbo site na kọmputa gị ka gị na iOS 7.1 ngwaọrụ enweghị iTunes mmekọrịta. Na ọ bụrụ na ị na-apụghị mmekọrịta music gị iOS ngwaọrụ mgbe upgrading ka iOS 7.1, na ị na ike nweta ihe mgbaru ọsọ gị na ngwá ọrụ a kwa.
Wondershare Dr.Fone - The World mbụ iPhone, iPad na iPod aka data mgbake software naghachi furu efu kọntaktị, ozi ederede, foto, na ndetu, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iOS ngwaọrụ tupu upgrading ka iOS 7.1, mgbe ahụ, ị nwere ike nweta furu efu data si iTunes ndabere ma ọ bụ iCould ndabere na Wondershare Dr.Fone. Na n'oge oge nke na-eji iOS 7.1, ọ bụrụ na ị furu efu ma ọ bụ hichapụ ihe dị mkpa, i nwere ike na-agbalị Wondershare Dr.Fone iji nweta ha azụ kwa. Mụta otú iji ya na ihe ụdị faịlụ ọ na-akwado >>
Wondershare SafeEraser - Gbochie njirimara na-ezu ohi si gị iPhone, iPad na iPod aka na 1-pịa "dị ọcha wepụrụ ebubo" chebe maka kacha nzuzo nchebe. Dị nnọọ dị ka aha ya na-egosi, ọ na-enyere gị ihichapu ihe niile na ngwaọrụ gị iji nyere gị aka kpuchido nzuzo gị.
Ọtụtụ jailbroken iOS ọrụ nchegbu banyere ma ọ bụ omume na-jailbreak iOS 7.1. Nke bụ eziokwu bụ na iOS 7.1 patches na ozize 7, nke pụtara mgbe ị upgrading ka iOS 7.1, ị pụghị nga agbaji gị iOS ngwaọrụ Evasi0n 7. Apple ekeleela evad3rs jailbreaking otu site aha maka ịchọta nche chinchi nke e ofu na iOS 7.1. Ma ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ nche chinchi emegbu hackers, dị ka ọ na-adịbu, ị kwesịrị ị na-eche ọtụtụ ọnwa ọzọ ịmụta otú jailbreak iOS 7.1.
iPhone Nọgidesiri na mgbake mode Mgbe upgrading ka iOS 9
Olee otú ndabere iPhone Tupu Jailbreaking iPhone
Olee otú Hichapụ iPhone Data-enweghị adịkwa Jailbreak
Olee otú iji weghachi iPad Mgbe Jailbreak
Olee otú akwagakwa si Old iPod ka New iPod?
Olee otú iji weghachi iPhone Mgbe Jailbreak
Esi jailbreak iPhone 5S
Hichapụ oyiri Photos on iPad na iOS 9/8/7
5 Music ngwa ọdịnala n'ihi iOS 7 Ị Pụrụ Ịbụ na Mara
Otú nyefee Data si iOS Devices ka HTC ekwentị mkpanaaka na
Best 15 iOS 8 égwu Iji na-enwe Ebube iOS Life
Otú nyefee Data si LG ka iOS Devices
Otú nyefee Data si iOS Devices ka Huawei ekwentị mkpanaaka na
Otú nyefee Data si Samsung ka iOS Devices
Get Music anya iOS 7 on Mac / Windows PC
Best iOS Files Nyefee gaa na nyefee faịlụ na iOS Devices
> Resource> iOS> Gịnị bụ New Na Apple iOS 7.1 na ihe ndị na mkpa gị ige nti